भारतीय सेनासँगको झडपमा ३८ चिनियाँ जनमुक्ति सेना मारिए, के हो यथार्थ ? भिडियो सहित — Imandarmedia.com
भारतीय सेनासँगको झडपमा ३८ चिनियाँ जनमुक्ति सेना मारिए, के हो यथार्थ ? भिडियो सहित
काठमाडौं। दुईवर्ष अगाडि सन् २०२० मा जुन १५ का दिन विवादित सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकामा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच हिंस्रक झडप भएको थियो। सो झडमा २० भारतीय सेना र पाँच चिनियाँ सेनाको ज्यान गएको थियो।
तर हालै सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार चीनले आफ्नो पक्षमा भएको हताहतीको खबर लुकाएको छ। चीनले पाँच सेनाको मात्र ज्यान गएको बताएको थियो। तर अस्ट्रेलियाको पत्रिका ‘द क्लाक्सकोन’को रिपोर्ट अनुसार चीनले जानकारी दिएभन्दा बढी चिनियाँ सेनाको मृत्यु भएको थियो।
पत्रिकाका अनुसार कम्तिमा पनि ३८ चिनियाँ जनमुक्ति सेना भारतीय आक्रमणमा मारिएका छन्। रिपोर्टले चिनियाँ ब्लगर तथा अन्य स्वतन्त्र खोजकर्ताको अनुसन्धान उल्लेख गर्दै भारतकोभन्दा बढी चिनियाँ पक्षमा हताहती भएको जानकारी दिएको हो।
बीबीसीका अनुसार यो रिपोर्टपछि चिनियाँ ब्लगरको ज्यानमा खतरा आउनसक्ने भएकाले उनको नाम अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छैन। यसअघि दुुईवर्ष अगाडि नै भारतले पनि ४० चिनियाँ सेनाहरु मारिएको बताएको थियो।
तर चीनले आफ्ना चारमात्र सेनाको मृत्यु भएको बताएको थियो। घटनाको ८ महिनापछि पुुनः चीनले अर्का एक सेनासहित पाँच जनाको मृत्यु भएको पुुष्टि गरेको थियो। द क्लाक्सकोनको रिपोर्टअनुसार चीनले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन मृत सेनाको संख्या लुुकाएको हो।
अखबारमा लेखिएको छ,‘गलवानमा जे भयो त्यसबारे बेइजि«ङले सत्य भनेको छैन, लुकाएको छ। कयौं ब्लग र सामाजिक संजालका पेजहरुमा धेरै चिनियाँ सेनाको मृत्यु भएको खबर लेखिएको थियो जुन त्यहाँको सरकारले हटाएको छ।
एएनआईका अनुसार द क्लाक्सकोनसँग चिनियाँ मिडियाले सार्वजनिक गरेको भिडिओ फुुटेज छ जहाँ दर्जनौं चिनियाँ सेना घाइते भएको देख्न सकिन्छ। भिडिओेले पनि चीनका पाँचभन्दा बढी सेनाको मृत्युु भएको प्रस्ट पार्ने समाचारमा जनाइएको छ।
भारतीय सेनाले गस्ती गर्नको लागि लगाएको अस्थायी पुल चिनियाँ सेनाले हटाएपछि त्यहाँ विवाद भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ। सीमांकन नगरिएको क्षेत्र एलएसीमा भारत र चीनबीच दशकौंयता सीमा विवाद छ।
लद्दाख नजिकैको गलवान उपत्यकालाई यी दुवै राष्ट्रले दाबी गर्दै आएका छन्। एलएसीको नियमअनुसार यो क्षेत्रमा दुवै तर्फको सेना जान नपाउने नियम छ। तर दुवै तर्फ बाट पालना भएन।
तर यो झडप हुनमा दुवैतर्फका सेनाले एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै आएका छन्। भारत र चीन दुवैले एकअर्कालाई एलएसीको नियम तोडेर गलवानमा घुसेकाले झडप भएको बताउँछन्।
सीमा क्षेत्रमा भारत र चीन दुवै राष्ट्रले गोली नचलाउने सहमति गरेका छन्। तर त्यसबेला दुवै देशका सेनाले गोली नचलाएता पनि ढुंगा, मुडा र भाला प्रयोग गरेका थिए।
तेस्तै, बङ्गलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेनले ढाका चिनियाँ ऋणको जालमा परेको दाबीलाई खारेज गरेको सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ।संचार माध्यममा आएको दाबीलाई उनले अस्विकार गरेका छन्।
शनिबार ढाकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मोमेनले बंगलादेशलाई चीनले दिएको ऋण मुलुकको बाह्य ऋणको सानो अंश मात्रै रहेको बताएका छन्।
सिन्ह्वाका अनुसार मन्त्रीले ऋण जाल चिन्ता भनेको चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई ध्वस्त पार्ने र बेइजिङ र ढाका वा यस क्षेत्र र बाहिरका अन्य देशहरू बीचको सहयोगलाई रोक्नको लागि गरिएको स्पष्ट प्रयास हो भनेका छन्।
मोमेनले कथित अधिकार दुरुपयोगको आरोपमा देशको र्‍यापिड एक्शन बटालियनका अधिकारीहरूमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धको आलोचना गरेपछि यो कदम धेरै दुर्भाग्यपूर्ण र तथ्यमा आधारित नभएको भएको भन्दै आएको छ।